स्वघाेषित सामाजिक 'अभियन्ता'को आतंक, जतासुकै तीन करोड नेपालीको धम्की - Hamro Bulletin
शुक्रबार २२, साउन २०७८ ०७:५६
स्वघाेषित सामाजिक 'अभियन्ता'
हाम्रो बुलेटिन शुक्रबार, ०४ असार २०७८
स्वघोषित सामाजिक अभियन्ता हेमराज थापाले केही दिनअघि चितवनमा झगडा गर्दै गरेको भिडियो आएको थियो । मजदुरलाई खाना खुवाउन भन्दै भरतपुर पुगेको उनको समूहले स्थानीय युवासँग विवाद गर्‍याे । यद्यपि, स्थानीयवासीले अनुनय गरेर उनीहरूलाई त्यहाँबाट पठाए र सम्भावित झगडा रोकियो ।
थापाको पारदर्शी आयस्राेत केही छैन । राहत बाँड्न भन्दै अरुबाट पैसा उठाउँछन् । र, गाडीमा युट्युबर, सहयाेगीहरू लिएर फिल्डमा जान्छन् । तस्वीर, भिडियो खिच्छन् र फेसबुकमा पोस्ट गर्छन्- आज यति जना भोकाहरूलाई खाना खुवायौँ । सरकारले गर्न नसकेको काम गर्‍याैँ । अनि आफूले लगेको युट्युबरलाई अन्तर्वार्ता दिन्छन् । आफूलाई तीन करोड नेपालीको साथ रहेको र कोहीसँग नडराउने बताउने थापा पनि झैझगडाका कारण बारम्बार विवादमा आउने गरेका छन् ।
भट्टराईका सहयोगीले भिडियो खिच्दै प्रश्न गर्ने ती व्यक्तिलाई हटाउन खोजे । एकैछिनमा प्लेन उड्यो । पछि मन्त्री भट्टराईले आफ्नो कारणले १५ मिनेट प्लेन डिले भएको भन्दै माफी मागे । तर, ज्ञानबहादुर राेकिएनन् । मन्त्रीले ढाँटेको भन्दै उनले कुपण्डोलमा पत्रकार सम्मेलन गरे । तर, त्यो पत्रकार सम्मेलन उनकै लागि भारी पर्‍यो । त्यहाँ उपस्थित अनेरास्ववियूका विद्यार्थीले उनलाई अनेक प्रश्न गर्न थाले, ‘तपाईंको आयस्रोत के हो ? पढाइ के हो ? वास्तविक नाम किन लुकाउनुभएको ? तपाईं झुट, ढोंंगी हो । तपाईं एसएलसी फेल हो कि होइन ? इत्यादि ।'
उसाे त, जो पनि आफूलाई सामाजिक अभियन्ता भएको दाबी गर्न थालेपछि ट्विटरमा खिसिटिउरी हुने गरेको छ । कतिपय ट्विट यस्ता सामाजिक अभियन्तालाई कटाक्ष गर्दै आउने गरेका छन् । जस्तो कि ट्विटरमा घाटे वैद्य लेख्छन्, ‘प्रश्न उठाउन नपाइने, शासक र सनकी मानसिकता बोकेका सरकारको काम गर्ने सबै लम्पट हुन्छन् भन्ने सोच्ने, समाजदेखि टाढा रहेका, विलासी जीवन बिताउनेलाई सामाजिक अभियन्ता भनिन्छ ।'
त्रिभुवन विश्वविद्यालय समाजशास्त्र विभागका उपप्राध्यापक प्रेम चलाउने लेखक उप्रेतीको भनाइसँग सहमत छन् । उनी पनि लोकतन्त्र र राज्यका विभिन्न संस्थाहरूको क्षयीकरणले नै 'एटेन्सन सिकरहरू'लाई मौलाउने मौका दिएको बताउँछन् ।
‘कमजोर लोकतन्त्र अनि नाजुक सेवाप्रवाहका कारण नागरिक आक्रोशित छन् । त्यसैले नेतालाई गालीगलौज गर्ने, प्रणालीलाई धिक्कार्नेहरू ती आक्रोशित नागरिकका अघि साथीजस्ता बन्न पुगे,' उनी भन्छन्, 'तर, डर के हो भने, कालान्तरमा एउटा ठूलै जमातलाई यस्तै कथित सामाजिक अभियन्ताले डोर्‍याउन सक्छन् । यसप्रति बेलैमा ध्यान दिन सक्नुपर्छ, खासगरी राजनीतिज्ञले ।'